Iska ilaali Qatarta uu leeyahay Mobilada Casriga ah ee Smart phones-ka Waa maxay sababta? ~ www.Ifiyahacilmiga.blogspot.com
Iska ilaali Qatarta uu leeyahay Mobilada Casriga ah ee Smart phones-ka Waa maxay sababta?
2:25:00 AM Tichnlogy-yada No comments
Ma is leedahay telephoneka aad sidato ee noociisu smart phoneka ku abtirsadaa inuu gudbiyo halka aad joogto in ka badan 5000 oo jeer mudo laba usbuuca gudahood. Waa run laakiin waxooga waad ka naxday. Daraasada la sameeyey dhawaan ayaa waxay daaha ka rogtay in telephonada smart phonesk ay wataa application-o ka qayb qaata gudibinta goobta aad kusugan tahay inta aad ogtahay in ka badan.
Baadhista amaanka khusaysa ayaa digniin u culus u dirtay dadka adeegsada applicationada ay ka midka yihiin Facebook, GO Launcher EX, Groupon iyo waliba todoba application oo kale kuwaas oo qiyaastii gudbiya 5,398 oo jeer.
Intii lagu gudo jiray daraasada waxay sidoo kale ku samaynaysay indho indho 23 qof oo adeegsada andriod smartphone mudo sadex week ah.
xuquuqda qoraalka waxaa leh www.ardaykaab.com